Igbo, Romans, Lesson 005 -- Identification and apostolic benediction (Romans 1:1-7) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 005 (Identification and apostolic benediction)
a) Nchọpụta na mmata nkwuputa nke ndi Rom (Ndị Rom 1:1-7)
NDI ROM 1:7
7 Amara diri gi, udo nke si n’aka Chineke, bu Nna anyi, na Onye nwe anyi Jesu Kristi.
Nkwuputa nke Apostolic, nke Pol jiri otutu otutu n’ime akwukwo ozi ya, bu nchikota nke ihe omuma ya banyere okpukperechi, ntughari nke ikike ndi ozi ya, na nghota nke otutu ngozi ya, nke o wukwasiri ndi n’agu ya. Yabụ, tinye onwe gị nwayọ n'okpuru mmiri amara n'okwu ndị a, ma tulee ha n'obi gị ka ị baa ọgaranya na Chukwu. Debe uzubochi nke Ndiozi n’ime obi gi, were kwa okwu n’obere tinye gi obi uto.
Ihe mbu nke onye ozi n’enye gi bu amara zuru oke, nihi na onwere ihe gi n’agha na ala n’iyi, ma Chineke huru gi n’anya, Ochoghi ikpochapu gi. N'ihi ọnwụ nke otu nwa ọ mụrụ, Chineke, karịa ikpe gị ikpe, ga-agụ gị n'onye ezi omume. Amara bu udi nke ihuru Chineke n'anya. Onye Nsọ na-abụ onye ezi-omume, ọbụlagodi ma ọ bụrụ n’onye ezi omume n’onye ezighi ezi. Onyinye nile nke Chineke bu nke gi, ma azịza nke ekpere gị nile bu amara, n’ihi na odighi ihe ozo Ikwesiri iwe.
Ot'odi, onodu ayi nebe Chineke no agbanwewo nihi onwu Kraist; Onye iro na onye mmehie gara aga bụbu onye iro dị n'etiti Chineke na ndị mmehie, ma udo adịwo ugbu a n'ihi mkpezi nke obe. Onye Nsọ ebighi ebi agaghị ebibikwa anyị ma ọlị. Okwu mbu nke Kraist kwuru mgbe nbilite n’ọnwụ ya bụ: “Udo diri unu”. O mezuru ihe niile Iwu ahụ chọrọ, na enweghị mkpesa ọzọ megide anyị n’ihu Chineke, n’ihi ọbara Kraịst, nke na-asacha anyị. Oge ohuru malitere site na ezi udo nke biri n’ime obi di ocha.
Onye obula nabatara amara zuru oke nke Kraist ma biri n’udo n’ebe Chineke no, ghotara oke ihe ebube na Onye Okike na Onye puru ime ihe nile abughi onye ochichi obi ojoo nke choro ka anyi fee ya na ima jijiji, kama o bu Nna anyi hu anyi n’anya, ma na eche banyere anyi. Ọ hapụghị anyị, kama anyị ga-ahụ anyị ọzọ. Onweghi okwu n’agba agba mara nma karịa “Chineke bụ Nna anyị”. Ihe omuma a nke akwukwo nso bu Kraist n’onwe ya wetara ya. Echiche nke ịbụ nna nke Chineke bụ mkpughe ọhụrụ na Iso .zọ Kraịst. Ọzọkwa, ebum n’obi nke obe bụ ka anyị sachapụ anyị ka anyị nwee ike ịnwe nkuchi, ọmụmụ nke abụọ, na ebe obibi nke ndụ ebighi ebi n’ime anyị. Nke a bụ ka Chineke wee bụrụ Chineke anyị, anyị onwe ya bụ ụmụ ya.
Imaara Jizọs Kraịst? You matara ịdị ukwuu ya na obi umeala ya? Ọ bụ nwoke ma Chukwu n’onwe ya. O nyere ebube ya, wedara onwe ya ala iji gbapụta anyị. Ma mgbe o mechasịrị mkpuchi mmehie maka mmadụ niile, ọ rịgooro Nna ya, ebe ọ na-anọdụ n'aka nri ya, onye a na-asọpụrụ nke ukwuu, n'ihi na ọ bụ naanị ya nwere ike ime ka ụwa na Chineke dị ná mma. Nke a mere Jizọs jiri keta ikike Chineke. Ọ bụ ya bụ Chineke n’onwe ya. Ọ bụkwa ya bụ Onyenwe gị? Ọ chọrọ ịchịkwa ndụ gị; ịsachapụ, ido-nsọ, na iziga gị ka ọ chọrọ.
EKPERE: Nna nke bi n’elu igwe, I bu Nna m n’ime Jizos Kraist. hooro putara m furu efu ma buru onye n’adighi nma ka m buru nwa nke gi. Adakwuru m n’ala, fee gị ofufe, hụ gị n’anya, na-enye ndụ m, ego m, ike m, na oge m nye gị na Ọkpara gị. Mee m ihe ị chọrọ ka m ghara ịbụ ihe ihere gị, kama were ugwu dị aha gị sọpụrụ nna gị. Daalụ maka na i zitere Ọkpara gị Jizọs ka ị zọpụta ndị mmehie niile. M ji otuto ebighị ebi na-efe gị.
Olee nkwupụta a na enedlọ nkwuputa ndịozi ị chere na ọ bụ ya kacha mkpa ma rụpụta ihe na ndụ gị?
Page last modified on January 25, 2021, at 05:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)